Manifold GIS, soo koobitaanka ugu fiican - Geofumadas
Manifold GIS, soo koobid ugu fiican
Maarso, 2008 ArcGIS-ESRI, GIS kala cayncayn ah
Anigu waxaan isticmaalay Nidaamka Manifold muddo yar sanad, ka dib markii dhowr boosto laga soo qaatay waayo-aragnimadayda adeegsiga software-ka, halkan waa soo koobidda ugu fiican.
Khariidadaha dijitalka iyo sawirrada
Ha sameynin CAD sida barnaamijyada GIS ay sameeyaan
Hoos u dhig khariidada dwg / dgn
Sida loo dhejiyo khariidad sawir leh
Talooyin iyo buugag
Buugga Manifold ee Isbaanish
Dhacdooyinka iyo wararka ee Manifold GIS
Kala duwanaanshaha mustaqbalka
Ugu Wanaagsan Shirka Manifold
Sameynta khariidado iyo ficillo
Ma la yaaban kartaa khariidad kaliya?
Ku xiridda khariidad la leh Google Earth
Manifold Systems, qalab $ 245 GIS
Sidee ayuu Manifold u joogi karaa raqiis?
Faa'iidooyinka ugu fiican ee Manifold leeyahay, waa qiimaha hooseeya waxaad ku samayn kartaa xoog badan oo awood leh waxa ArcGIS Desktop, ArcIMS, ArcSDE, ArcEditor iyo dhowr ka mid ah ballaarinta Arc sameeyo. Wax kasta oo ay sameeyaan alaabooyinka ESRI, oo ah kuwo aan wanaagsanayn, laakiin wax kasta oo ay sameeynayso wax kasta oo ay qabato.
Dhibaatooyinka, yar yar ee la yaqaan iyo sida loo sameeyo waxyaabaha ma aha sida caadiga ah ee ArcGIS, sidaa daraadeed waa inaad oo aan caddayn wax yar, Buugga "sida loo sameeyo ArcGIS iyo Manifold" buugga wax badan ayey i caawisay.
Hadda, Manifold waa inuu la dagaallamaa dagaalka si uu uga baxo astaamihiisa iyada oo aan sicirka qiimaha kor u qaadin ...
Waxaad sidoo kale ka hubin kartaa xiriirkan si aad u eegto mawduucyada kala duwan ee mawduucyada Manifold GIS ee ku yaala boggan.
Bogga rasmiga ah: http://www.manifold.net
Dgn Dwg ESRI Google Earth GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous CadCorp GIS Guide Quick
Post Next Sidee ayuu Manifold u joogi karaa raqiis?Next »